AFRICOM Oo Riwaayado is burinaya kasoo saartay Weerarkii Ballidoogle. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Oct 2, 2019 585 0
Taliyaha Africom iyo safiirka Maraykanka ee Soomaaliya.
Taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa ayaa siyaabo kala duwan oo is burinaya uga hadlay weerarkii weynaa ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab maalintii Isniinta ku qaaday saldhiga garoonka Ballidoogle oo ah saldhiga ugu weyn ee Maraykanku ku leeyahay Soomaaliya.
Saacadihii koowaad ee uu weerarku socday, waxay Africom xaqiijisay jiritaanka weerarka, iyadoo shaaca ka qaaday iney soo gudbin doonto wixii soo kordha.
Shan saacadood kadib weerarkii Ballidoogle, waxay Africom soo saartay war kale oo ay ku sheegeyso in ciidamadooda ay iska caabiyeen weerar uga yimid dagaalyahanno katirsan Al-Shabaab.
Africom waxay xilligaas shaaca ka qaaday iney labo duqeyn ka fuliyeen halka lagu dagaallamay, ayna beegsadeen ugu yaraan labo gaari oo kamid ah kuwii lagu soo weeraray xerada Ballidoogle, halkaasna ku dishey dagaalyahanno katirsan Xarakada Al-Shabaab.
Waxay intaa ku dartay Africom inuusan jirin wax khasaare ah oo gaaray ciidamadooda iyo kuwa saaxiibadooda ay ku tilmaameen ee xerada kula sugnaa.
Africom intaas kuma ekeysan, 24 saacadood kadib weerarkii Ballidoogle, waxay soo saartay war saxaafadeed kale oo ay ku sheegeyso wax ka duwan hadalladii hore.
Waxay shaacisay in duqeymaha ay fuliyeen aaney ka badneyn hal duqeyn, halkii labo gaari ay hore ka sheegteen iney buburiyeenne waxay shaaciyeen markale in hal gaari oo keliya ay gubeen.
Marka laga hadlo khasaaraha gaaray ciidamada Maraykanka, waxay Africom shaaca ka qaaday inuu jiro hal askari oo uga dhaawacmey weerarka ay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab kusoo qaadeen garoonka Ballidoogle.
Kala hadalka ciidamada Maraykanka ayaa muujinaya xaddiga ay la ekeyd camaliyadda ballaaran ee lagu qaadya Ballidoogle, waxaana suuragal ah in Africom ay ku qasbanaato in markale ay warar kala duwan kasoo saarto weerarkii Ballidoogle.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo si waafi ah uga hadashey weerarkii Ballidoogle, waxay shaaca ka qaaday iney ku dishey 121 askari Maraykan ah, 12 askari oo Yahuudi ah iyo 40 qandaraaslayaal ah oo u shaqeynayay ciidamada Maraykanka.
Waxay sidoo kale Mujaahidiintu sheegeen iney goobta ku gubeen ugu yaraan 5 diyaaradood oo isuga jira Drones iyo Hellecopter.